DHEGEYSO-Barnaamijkii Tartan iyo Tacliin oo gaarey wareegii ugu dambeeyey. – Radio Daljir
DHEGEYSO-Barnaamijkii Tartan iyo Tacliin oo gaarey wareegii ugu dambeeyey.
Luulyo 18, 2016 11:42 g 0
Boosaaso, July 19 2016-Magaalada Boosaaso ee xarunta gobolka Bari ayaa waxaa xalay lagu soo afmeeray wareegii semi finalka ee barnaamijkii tartan iyo tacliin oo mudo dheer kasocdey Idaacadda Daljir xarumeheeda kala duwan.
Xiisado saaka laga dareemayo deegaamadii shalay lagu dagaalamay ee Sanaag.
DHEGEYSO-Barnaamijkii Saaka iyo Dunida Xarunta Boosaaso iyo Kooshin.